mardi, 07 mai 2019 22:26
Blagnac France: Les 4 otages libérés
Les 4 femmes retenues en otage depuis 17h, dans un bar tabac de Blagnac, près de Toulouse, par un jeune mineur de 17 ans ont été tous libérées.
Le jeune, connu par la police par des faits mineurs, est inconnu par le service anti-terroriste.
mardi, 07 mai 2019 21:31
Blagnac France: Prise d'otage
4 personnes sont retenues en otage, dans un bar tabac de Blagnac, près de Toulouse, par un jeune mineur de 17 ans.
Il a demandé de parler à un négociateur, et il vient de libérer une femme, il en reste 3 encore, retenu depuis 17h.
Le Raid, unité d'élite de la police nationale a été déployée sur place.
Le jeune homme est connu de la police par des faits mineurs.
mardi, 07 mai 2019 20:26
Rastany sy David: Andro faharoa amin'ny fampielezan-kevitra eto amin'ny Boriborintany faha II
Manohy ny fitetezana ireo fokontany eto amin'ny Boriborintany faha II ny kandida mpiray lisitra narotsaky ny antoko Tiako I Madagasikara - K25, dia Randrianarisoa Stanislas na Rastany sy Tahinjanahary David, ity farany izay zanak’Imady tokana sahy hiatrika fifidianana eto Antananarivo Renivohitra.
Anisan'ny nanome tsodrano ireto kandida ireto ny Raiamandreny sy mpikambana ao amin’ny IMIANTA (Imady MIray eto ANTAnanarivo).
Voatsidika tamin'izao andro faharoa izao ireo mponina ao amin'ny fokontany Andohamandry, Manakambahiny, Ambohimiandra, Ambohitsoa, Androndra ary Saropody.
mardi, 07 mai 2019 20:21
Fampielezan-kevitra: Nilamina ny andro voalohany sy faharoa
Nisokatra omaly alatsinainy 6 mey ny fampielezan-kevitra momba ny fifidianana solombavambahoaka, izay atao ny 27 mey ho avy izao manerana ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara, haharitra 21 andro izany fampielezan-kevitra izany, ka hifarana ny 25 mey 2019 misasak’alina.
Nilamina amin'ny ankapobeny ny fanombohan'izany, samy mifanaja avokoa ireo kandida.
Nanomboka tamin'ny diabe sy carnaval ny ankamaroany, tao kosa no nanao fotoam-pivavahana, tao no naka tsodranon-dray amandreny.
Niavaka kely ny tany Maroantsetra, izay nanambara am-pahabemaso nandritra ny fanaovana sonia hifanarahan'ny Kandida fa tsy misy anaratsy ny hafa, fa ity Kandida ity kosa nilaza fa izy dia anaratsy sy anakina kandida hafa, izay mifaninana aminy.
Maro ireo kandida no manana trano sy foibe-toerana manokana azo atonina hanontaniana ny vinan'ireo kandida.
mardi, 07 mai 2019 19:29
OMACI: Noterena hatao androany ny famindram-pahefana
Filankevitry ny minisitra tamin’ny 17 aprily 2019 no nandraisana ny Didy hitsivolana manafoana ny lalàna laharana faha-2017-011 tamin’ny 26 jolay 2017 mikasika ny politikam-pirenen’ny sarimihetsika sy ny sary miaina araka ny volavolan-kevitra naroson’ny Minisiteran’ny serasera sy ny kolontsaina.
Nampahatsiahivina tamin’ny tati-baovao nomena ny mpanao gazety tamin’io, fa ny lalàna laharana faha-2018-037 mikasika ny fotokevitra mifehy ny orinasam-panjakana na sampan-draharaham-panjakana dia milaza mazava fa didim-panjakana fa tsy lalàna no hamaritana ny fananganana sampa-draharaham-panjakana tahaka ny OMACI na ny Ofisy malagasy momba ny sarimihetsika sy ny sary miaina.
mardi, 07 mai 2019 19:24
BEBOARIMISA Ralava: Manaja ny fomban-drazana, Antragnobe no miainga ny zavatra atao
Zanaky Manakara i BEBOARIMISA Ralava, kandida ho solombavambahoaka avy amin'ny antoko Banjino ny Repoblika - BR, mitondra ny laharana faha 2 amin'ny bileta tokana.
Nangataka ny tsodrano tamin'ireo Ray aman-dreny ampanjaka ity zanaky Manakara ity alohan'ny hanao ny asa rehetra.
Taorian'ny fangataha-tsodrano dia nisy ny fihainoana ny hetahetan'ny mponina tao amin'ny Tranobe.
Nandritra ny lahateny izay notaony dia nanambara sy nanazava ny vinany i BEBOARIMISA Ralava fa ny tantsaha sy ny tontolo iainana no fototry ny fampandrosoana.
mardi, 07 mai 2019 18:55
Feno sy Bodo: Nisantatra ny Fampielezan-kevitra tamin'ny fidinana isam-pokontany
Nitomandavana ny mpiara-dia tamin'i RALAMBOMANANA Fenoherintsoa, na i Feno sy RAZAFINDRAZAKA Bodoharisoa Faliherinantenaina na i Bodo mpihira, teto amin'ny Boriborintany faha III.
Nitety ireo fokontany sy nanantona ny mponina nampahafantatra ny vinan'izy ireo amin'izao filatsahan-kofidiana ho solombavambahoaka eto amin'ny Boriborintany faha III izao.
Mitondra ny laharana 01 ity lisitra natolotry ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM) ity, ary anisan'ny imasoan'izy ireo ny hisian'ny lalàna sy vina miroso amin'ny sosialim-bahoaka, amin'ny famoronana asa.
I Feno sy Bodo rahateo dia tsy zoviana amin'ny maro intsony fa samy eo amin'izay sehatry ny fandraharahana sy fanaovana izay asa sosialy izay avokoa.
mardi, 07 mai 2019 15:11
Asan-jiolahy: Nidoboka eny Antanimora ireo mpanendaka teny Ankazomanga
Fanafihana fiara 4x4 sy fanendahana miaro halatra moto nitranga ny alin’ny sabotsy hifoha ny alahady 5 mey 2019 teny amin’ny faritra Ankazomanga no nahatraran’ny polisy avy eo amin’ny « Poste Avancé » Antaniavo – Antananarivo azy ireo.
Natolotra ny Fampanoavana omaly alatsinainy 06 may 2019 izy ireo no hazonina vonjy maika eny am-ponja Antanimora.
mardi, 07 mai 2019 15:10
Halatra lavanila: Angaha voalamina amin’ny raharaham-pihavanana indray ?
Tsy mbola misokatra ny taom-piotazana lavanila aty SAVA. Heverina ho halatra avokoa araka izany izay tratra mitondra lavanila tsy matoy, toy ity 10kg tratra tao amin’ny Fokontany Antsirabato, Kaominina Ampohibe, Distrika Antalaha, omaly 06 mey 2019.
Nentina eny amin’ny mpitandro ny filaminana hatao raharaham-pihavanana, ka ampandoavina 10 tapitrisa Ariary ilay mpangalatra lavanila.
Ny mampametra-panontaniana dia hoe angaha voalamina amin’ny raharaham-pihavanana indray ny halatra lavanila nefa hatramin’izay midoboka amponja avokoa izay tratra, ankoatra ireo izay niharan’ny fitsaram-bahoaka.
Ahiana hampirongatra ny halatra lavanila ny tranga toy izao, hoy ny tantsaha mpamboly lavanila raha toa ka vitavita amin’ny raharaham-pihavanana.
mardi, 07 mai 2019 10:45
Sambava: Dahalo mitsapatsapa ny fahaizamanaon’ny mpitandro filaminana
Ny alatsinainy 06 mey 2019 no voatondro ho fanomboan’ny hetsika hiadiana amin'ny tsy fandriampahalemana ato amin'ny faritra SAVA, izay nambara tamin'ny fomba ofisialy natrehin’ny lehiben’ny OMC-REG sy ny avy ao amin'ny Faritra ka hanaparitahana Zandary 200 mahery.
Ny sabotsy 04 mey misasakalina teo dia nisy ny fanafihana mitam-basy naharitra adiny iray teto an-drenivohitr’i Sambava tao amin'ny Fokontany Besopaka.
Tokantrano miisa roa mpiraitampo no lasibatra tamin'izany ka ny an'ny zandriolona no voatafika voalohany, avy eo ireo jiolahy nifindra tao amin'ilay zokiny, izay mpikirakira lavanila. Nisy ny fifanjevoana tao amin’ity farany. Nanapoaka basy ny dahalo, iny no nanaitra ny manodidina. Nandositra ireo jiolahy rehefa tsapan’izy ireo fa nifoha ny olona.